Teknolojiyada Shidaalka Kobaca Dhaqaalaha ee Indiana | Martech Zone
Khamiis, Maarso 24, 2011 Jimcaha, Agoosto 24, 2012 Ball Lorraine
Aniga oo garsoore ka ah Abaalmarinta Mira Awards 2011, waxaan fursad u helay in aan maalin kulan la qaato aasaasayaasha, hal abuureyaasha, barnaamijyada iyo hogaamiyaasha ganacsiga oo saameyn weyn ku leh muuqaalka tikniyoolajiyadeena In kasta oo aanan kuu sheegi karin cidda guuleysatay, waxaad u baahan doontaa inaad ka soo qeybgasho abaalmarinta Mira bisha soo socota, waxaan kuu sheegi karaa inay jiraan waxyaabo runtii xiiso leh oo halkan ka dhacaya.
Sidaad filan lahayd, bandhigyo badan oo ka mid ahi waxay ku saabsanaayeen teknolojiyadda. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan aniga meesha shirkadaha waqtiga badan ku qaatay ka hadalka saameynta bulshada ee hal-abuurnimadooda. Mid ka mid ah oo aan u maleynayo inuu awood u leeyahay inuu si togan u saameyn ku yeesho bulshada ganacsiga dhexe ee Indiana waa codsi ay soo saartay MIBOR. Haa, waad aqrinaysaa xaqaas, DHAQAN (Guddiga Magaalada Indianapolis ee Realtors).
Marka maxaa qabtay MIBOR oo ay ku kasbadeen miiska teknolojiyadda? Waa codsigooda cusub TheStatsHouse.org. Waxaa soo saaray iyadoo lala kaashanayo Xarunta Cilmibaarista Ganacsiga Indiana, MIBOR waxay soo aruurisay xog ururin is dhexgal ah oo ku saabsan xogta waqtigeeda ku saabsan tusmooyinka guryaha Indiana ee bartamaha. Tani waa aalad awood u leh kooxaha horumarinta dhaqaalaha maxalliga ah ee isku dayaya inay soo jiitaan dareenka kooxaha xulashada goobta ayna ku qanciyaan shirkadaha u soo guurista Indianapolis inay macno sameyneyso.
Keenista tirakoobka, guriyeynta, iyo xogta dhaqaalaha ee faraha shakhsiyaadka tixgelinaya u guurista Indianapolis ama shaqaale qoris isku dayaya in ay ku soo jiitaan shaqaalaha ugu fiican bulshadayada qalabkani wuxuu dhisayaa sheeko adag. Xogta heerka caadiga ah iyo warbixinta caadiga ah waxaa lagu heli karaa PDF, Word iyo Excel rasmi ah, sidaa darteed dadka isticmaala waxay dhisi karaan jaantuskooda iyo garaafyadooda sidoo kale.
Marka lagu daro xogta tirakoobka caadiga ah goobta waxaa ka mid ah isbarbardhiga qiimaha nolosha, canshuurta guryaha, iyo qiimaha dollarka ee magaalooyinka dalka oo dhan. Mid ka mid ah astaamaha aan ugu jeclahay waa astaanta goobta. Muuqaalaynta cinwaan gaar ah, waxaad ku dhex milmi kartaa qurxinta bulshada ee bulshada dhexdeeda 2, 5, 10 ama 20 mayl gacan ah. Macluumaadka shaqada ayaa kuu sheegi doona inta meheradood, iyo noocyada ganacsi ee ka jira bulshada ku hareeraysan.
In kastoo aan jeclahay codsiyada horumarinta dhaqaalaha ee aaladda, waxaa jira dalabyo suuqgeyn xiiso leh oo aan ka fikiri karo sidoo kale.
Finalayaasha MIira ee sannadkan waxay ku riixayaan tikniyoolajiyadda iyo warbaahinta dhinacyo badan oo kala duwan. Waxaan rajeynayaa inaad diyaar u ahaato inaad u hambalyeyso guuleystayaasha bisha Maajo, oo aad aragto gacantaada koowaad sida ay u faraxsan yihiin bulshadeena tikniyoolajiyadda.
Tags: kobaca dhaqaalahadhaqaalahaindiana
Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada ayaa Guuldarreysatay